हिरासतमा रहेका पललाई देखेर पलका‘रुम पार्टनर’हरूले कारागार प्रशासनसँग यी कुरा खोलिदिएपछि…. – Sandes Post
April 3, 2022 1821
नाबालिका कर णी आराेपमा जेलमा रहेका अभिनेता पल शाहकाे निवेदन उपर उच्च अदालत पाेखरामा केहि दिन पहिले पहिलाे सुनुवाई भएकाे छ । उनीविरुद्ध तनहुँ प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे । जिल्ला अदालत तनहुँले धराैटीमा रिहाइकाे आदेश नदिएपछि उनले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाेखरामा आवेदन दिएका हुन् ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका अभिनेता पल शाह तनहुँ जिल्ला कारागारको नयाँ भवनमा छन्। त्यहाँका हरेक ब्लकमा ३० जनाका दरले कैदीबन्दी अट्छन्। तर पल शाहलाई राखिएको ‘बी’ ब्लकमा २० जना मात्रै छन्। कारागारको यो नयाँ भवन हो। दुईतले भवनको माथिल्लो तलामा सुत्ने/बस्ने व्यवस्था छ भने तल्लो तलामा खाना खाने, खेल्ने र लाइब्रेरी।
शाह कारागारको बन्दी बनेको केहि दिन मात्रै भयो। तर उनका ‘रुम पार्टनर’हरूले कारागार प्रशासनसँग भनेका छन्, ‘उहाँ त कस्तो फ्र्यांक हुनुहुँदो रहेछ। कति छिटो घुलमिल हुनु भो!’
यो तीन दिनमै उनी आफ्नो ब्लकका अन्य कैदीबन्दीसँग घुलमिल भइसकेका हुन्। करिब ५ सय पुस्तकसहितको लाइब्रेरी छ। बेलाबेला पुस्तक पढ्छन्। तर उनलाई आफन्त भेटघाटमै भ्याइनभ्याइ हुन्छ। भेटघाटबाट बचेको समय क्यारम बोर्ड खेल्छन्। ब्लकभित्र चेस खेल्ने सुविधा पनि छ।
कारागार प्रशासनले उनलाई सकेसम्म भेटघाट कम गर्न र आफ्ना निकटलाई मात्रै बोलाउन भनेको छ। ‘तपाईंलाई भेट्न खोज्नेजति सबैलाई भेट्नु पर्दैन, जसलाई तपाईंले पनि चिन्नहुन्छ उनीहरूलाई मात्रै भेट्नु भनेका छौं’, प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘हामी सबै उस्तै हो भनेका रहेछन्। उहाँको नर्मल बानी देखेर ब्लकका सबै खुसी छन्। उहाँ सेलेब्रिटी त हो, तर कानुनका हिसाबले एउटै नजरबाट हेर्नुपर्छ हामीले।’
Prevइमरान खानकी पूर्वपत्नीले गरिन् खुलासा, ‘उनको शब्दकोषमा त्यो ‘सम्मान’ भन्ने नै छैन, नभए म उनीसँगै हुने थिएँ’
Nextओहो ! केटिले मन नदिई पुरुषले छुनपनी सक्दैन भन्दै आइन् पलकी डाइ हार्ट ट्याम्पो वाली फ्यान (भिडियो हेर्नुस्)